Nezvedu - Beijing IWHR Corporation (BIC)
Iyo bhizinesi chiyero chinonyanya kufukidza:
BICinonyanya kushanda pakutsvagisa mune zvine chekuita nehunyanzvi minda senge mhiri kwemakungwa uye nyika zviwanikwa zvemvura uye hydropower, kutaurirana, simba, njanji, matunhu einjiniya, kuvaka nezvimwe .; Injiniya kuferefeta uye dhizaini, kuvaka, kutarisa, kubvunza uye kuongorora, kuongorora uye kuongorora, EPC; kutsvagisa nekusimudzira, kugadzira nekutengesa zvinhu zvitsva zveinjiniya, yekuongorora michina uye neruzivo-rwakavakirwa system, michina yekurapa mvura, uye michina yemagetsi; inozvibata-inoshanda uye kuve mumiririri wekupinza uye kutumira kunze bhizinesi remarudzi ese ezvigadzirwa uye tekinoroji.
Ipa dhizaini dhizaini, yakakwana seti, yekuisa michina chirongwa uye mushure mekutengesa sevadiki- nepakati-saizi yemvura yekuchengetedza mapurojekiti enjiniya. Dhizaini, kugadzira uye kuisirwa madhibhi erabha, madhibha e hydraulic erevheta;
BIC inotungamira mukutengesa michina yekurapa mvura uye kuvaka muChina uye ine timu yehunyanzvi yevagadziri, mainjiniya nevashandi ve manejimendi. Isu tinopawo technical technical kubvunza uye kushanda paEngineering, Procurement uye Kuvaka (EPC) mapurojekiti munzvimbo dzinotevera: matunhu emasefa kurapwa (ETP), maindasitiri kurapwa kwemvura (tannery mvura yakasviba, kudhinda uye kudhaya , mapurojekiti emvura uye kurapwa kwemhando dzakasiyana dzemvura (arsenic mvura, fluorinated mvura, forum- manganese mvura uye brackish mvura.) Mushure memakore akati wandei ekutsvagisa, BIC yakagadzira nhevedzano yezvinhu zvine chekuita nekurapa mvura zvinosanganisira: iyo Ultra Filtration (UF ), Reverse Osmosis (RO), Membrane Bioreactor (MBR), Seawater Desalination, Mafuta Kubvisa uye Containerized Mvura yekurapa Zvirimwa, uye Emergency Drainage Mota-Yakakwidzwa Pump. Izvi zvigadzirwa zvinoshandura uye zvinogona kuwanikwa nemutengo unonzwisisika.
Kunze & Export Kutengesa
Bata kupinza uye kutumira kunze kwemarudzi akasiyana siyana ezvigadzirwa zvinoenderana nemitemo yenyika pamwe nekuzvimiririra kana seanoshanda;